महिनावारी भएको बेला यौन सम्पर्क गर्दा कुनै पनि प्रकारको हानी हुँदैन - नेपालबहस
महिनावारी भएको बेला यौन सम्पर्क गर्दा कुनै पनि प्रकारको हानी हुँदैन
| १९:५६:१९ मा प्रकाशित
१९ माघ काठमाडौं । अमेरिकामा हालै गरिएको एक अध्ययनबाट महिनावारी भएको बेला यौनसम्पर्क गर्दा कुनैपनि प्रकारको हानी नहुने प्रमाणित भएको छ ।
महिनावारीका बेला सम्भोग गर्नु हुँदैन भन्ने बलियो मान्यता रहेको हाम्रो समाजमा अब यो अध्ययनले त्यो कुरा गलत प्रमाणित गरेको छ । अझ महिनावारीको समय सेक्स गर्न अभ्यस्त जोडीहरूका अनुसार यतिबेलाको सेक्स अझ बढी आनन्ददायी हुने अध्यनले देखाएको छ ।
पर सरेको बेला बार्ने या चोखोनितो गर्ने संस्कार भएको समाजमा महिनावारीको समयमा सेक्सलाई वर्जित नै गरिन्छ । तर, महिनावारी भएको बेला सेक्स गर्दा कुनैपनि प्रकारको हानी नहुने प्रमाणित भएको हो।
महिलाले अत्यधिक दुखाइ महसुस गरेकी छिन्, रगत धेरै मात्रामा बगेको छ र कुनै संक्रमण भएको छ भने सम्भोग नगर्नु राम्रो हुने अध्ययनले बताएको छ । कति पुरुष भने रजस्वला भएको बेला महिलाको योनीमा रगत हुने हुँदा फोहर पनि महसुस गर्छन् । यस बेला सम्भोग गर्न सहज मान्ने, नमान्ने दुवैको चाहनामा भर पर्दछ । यस्तो बेलाको यौन सम्बन्धले आनन्द नआउने कुनै कारण छैन ।
अध्ययनपछि भनिएको छ, सामान्यतया महिनावारी भएको बेलामा गरिएको यौन सम्बन्धले स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो बनाउँछ । यस्तो बेलामा गहन सम्भोग गरियो भने इन्डोर्फिन नामक हर्मोन सक्रिय हुन्छ, जसले महिलाको महिनावारीबाट भएको पीडालाई तुरुन्त कम गर्छ ।
सुरक्षित महिनावारी दिवस आज मनाइँदै ३ हप्ता पहिले
ग्रामीण क्षेत्र अझै भएनन् छाउगोठ मुक्त ११ महिना पहिले
पहिलोपटक महिनावारी हुँदा लुक्नुपर्ने बाध्यता ! ११ महिना पहिले
बहिनीलाई जवरर्जस्ती गर्ने दाजुमाथि अनुसन्धान जारी १ वर्ष पहिले
अब काठमाडौं उपत्यकामा बार अनुसार पसल खोल्न पाइने ३१ मिनेट पहिले
चीनबाट अनुदानमा प्राप्त भएको भेरोसेल खोप २२६ पत्रकारले लगाए ३१ मिनेट पहिले
आज थप २,४४२ जनामा कोरोना पुष्टि, ५१ संक्रमितको मृत्यु ४० मिनेट पहिले
पर्सामा असार १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी राखिने ४४ मिनेट पहिले
मेलम्ची बाढीः द्रुत आवश्यकता मूल्यांकन जरूरी ४५ मिनेट पहिले
स्थानीय तथा व्यवसायीहरु सुरक्षित स्थानतर्फ सामान सार्दै ४७ मिनेट पहिले
बाढीले पुरिएका सामान निकाल्दै स्थानीय र व्यवसायी ५० मिनेट पहिले
नबिल बैंकको स्वामित्वमा रहेको स्वावलम्बन लघुवित्तको शेयर बिक्रीमा ५४ मिनेट पहिले
बाढीले आफ्नो घर खेत बगाएको ठाउँ हेदै वृद्ध ५६ मिनेट पहिले
तपाईकाे साप्ताहिक राशीफल [ असार ०६ गते आइतबारदेखी असार १२ गते शनिबारसम्म ] ११ घण्टा पहिले
सक्षम नेतृत्व कांग्रेसलाई आवश्यक : वरिष्ठ नेता पौडेल २४ घण्टा पहिले
निषेधाज्ञाबीच बेहुला बेहुली मोटरसाइकलमा सरर २० घण्टा पहिले
मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकालाई आर्थिक सहयोग १ दिन पहिले
झापामा विद्यालयको जग्गा आफूखुशी भोगचलन गरेपछि आपत्ति २ दिन पहिले
मेगा बैंकले सुरु गर्यो ऋण अटोमेसन प्रणाली ५ दिन पहिले
पीडा र त्रासमा कोरोनाबाट मृत्यु भएका मृतकका परिवार २ हप्ता पहिले
एमालेका ४ सांसदको पद जोगियो १ हप्ता पहिले
सत्तामा पुगेपछि जसपामा चुलियो कलह २ हप्ता पहिले
बागलुङमा कसरी भयो कोरोनाको चेनब्रेक ? १ हप्ता पहिले
नेपाललाई चिनियाँ कम्युनिष्टबाट स्वास्थ्य सामग्री सहयोग २ हप्ता पहिले
कविता-भकुण्डेको चिनारी ३ हप्ता पहिले
अन्तरिक्षमा फोहोर कम गर्न काठको भू-उपग्रह बनाइने ६ महिना पहिले
कोरोनाबाट धुलिखेल अस्पतालमा पुरुषको मृत्यु २ महिना पहिले
चिनियाँ ह्याकरको आक्रमणमा सरकारी वेवसाइट, श्रम स्वीकृती, राहदानी र मालपोतका सेवा ठप्प २ वर्ष पहिले